स्वास्थ्य Archives – Page2of 149 – Kalika News
श्याम्पू लगाउँदा यस्ता गल्तीहरू गरिरहनु भएको छ ? जसको परिणामले गर्छ कपाललाई हानी
कपालको लागी श्याम्पू किन्दा हामी धेरै ध्यान राख्ने गर्दछौँ तर कपालमा श्याम्पू लगाउँदा त्यति ध्यान पुर्याउदैनौ र प्रायजसो: हामी गल्तीहरू गर्ने गर्छौं । जसको परिणाम स्वरूप हाम्रो कपाल झर्ने र कमजोर हुने समस्या देखापर्छ । कपालमा श्याम्पू लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विशेष कुराहरू यस्ता छन्, जान्नुहोस् । – प्रायजसो: हामी सोच्ने गर्छौं कि अधिक श्याम्पूको सेवनले कपाल सफा र बलियो हुन्छ तर यो गलत हो । अधिक श्याम्पू सेवन गर्नाले नोक्सान...
अमरगढी, १६ मङ्सिर(रासस) डडेल्धुरामा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ । एचआइभी सङ्क्रमित हुनेमध्ये बढीजसो कामको सिलसिला र रोजगारीका लागि भारत जानेमा बढी भएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ । एचआइभी सङ्क्रमित १३६ जनामध्ये डडेल्धुरामा हालसम्म ९६ जनाले मात्रै नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन् । बाँकी सङ्क्रमितले पुनं कामका लागि अन्य स्थान वा भारत जाने–आउने क्रमले गर्दा नियमित औषधि सेवन नगरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये आठ शिशुसमेत एचआइभी सङ्क्रमित छन् । सङ्क्रमितमध्ये...
सुख्खा छालाको लागि यसरि बनाउन सकिन्छ घरेलु फेसप्याक (भिडियो सहित )
सुख्खा छाला भएर हैरान हुनुहुन्छ तेसो भए अब ढुक्क हुनु किनभने भने अब घरेलु उपाए बाट मुक्त पाउन सक्नुहुन्छ । सुख्खा छाला हुनुको कारण यस्तो छ । पानीको कमीले गर्दा , हावाको कारणले गर्दा पनि छाला सुख्खा हुन्छ । साबुनले धेरै नुहाउनु हुन्छ भने अब साबुन कम पर्योग गर्नुहोस किनभने साबुनले छाला लाइ फुस्रो गराउने र छालाको पोशड सक्तिमा कमि लेर आउछ सुख्खा छालाले के नगर्ने : सुख्खा छाला हुनेले धेरै...
हेरौं के के छन हरेक बिहान १ स्याउ खानुका फाईदाहरु
मानिसहरुले आफुलाई स्वस्थ्य राखनको लागी बिभिन्न खानेकुरा, शारिरीक कसरत लगाएत बिभिन्न उपाएहरु अपनाउछन् । खानामा बिभिन्न प्रकारका पोषण तत्वहरु पनि पाईन्छ । जसका कारण मानिसलाई स्वास्थ्य राख्न ठुलो सहयोग पुगीरहेको हुन्छ । फलफुल पनि एक आहारा हो जो मानीसलाई आवश्यक पर्ने पौष्टीक तत्व पुरा गर्दछ । त्यसै गरी आज हामी तपाईहरु लाई ती फलफुल मध्य स्याउको बारेमा जानकारी गराउद छौ । जसलाई हामीले खाएपछि फाईदाहरु के के हुन्छन् ? स्याउ...
अछाम, १५ मङ्सिर यहाँ एचआइभी सङ्क्रमण दर घट्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार पछिल्ला वर्षमा जिल्लामा नयाँ सङ्क्रमित पत्ता लाग्ने दर घट्दै गइरहेको हो । विगत ११ वर्षको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा एचआइभी एड्सका नयाँ बिरामी फेला पर्ने दर निकै सुधारोन्मुख रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा ३४३ नयाँ सङ्क्रमित फेला परेकामा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ४३ जना मात्रै नयाँ बिरामी पत्ता लागेका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख...
शरद शर्मा काठमाडौँ, १४ मङ्सिर नेपालमा हाल करिब ३० हजार जना एचआइभी सङ्क्रमित रहेपनि यसको सङ्ख्या घट्दो दरमा छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार सन् २०१०को तुलनामा सन् २०१८ सम्ममा ५८ प्रतिशतले नयाँ सङ्क्रमण घटेको छ । हाल नेपालमा कूल २९ हजार ९४४ जनामा एचआइभी सङ्क्रमण भएको अनुमान छ । केन्द्रका निर्देशक डा अनुज भट्टचनले तीमध्ये पुरुष १७ हजार ७३२ र महिला १२ हजार २१२ जना रहेको...
सहवासका लागि डिसेम्बर महिनालाई यस कारण बिषेश मानिन्छ
अंग्रेजी महिना डिसेम्बर हरेक बर्षको अन्तिम महिना । त्यसैले पनि यो महिना अलिक फरक हुन्छ भने प्रेम जोडीहरुका लागि त झनै यो महिना बिषेश अनि रोमान्टिक हुने गर्छ । डिसेम्बर महिनामा चिसो बढेर जान्छ र यो महिना फेस्टिभल सिजन पनि हो जसले गर्दा महिना अझ राम्रो हुन जान्छ । यो महिनाको हावामा प्रेमको हावा चलेको अनुभव हुन्छ भने प्रेमको मौसमले पनि आफ्नो रंग फैलाउन थाल्छ ।आखिर किन रोमान्सका लागि...
प्रधानमन्त्री ओली अझै एकसाता अस्पतालमै रहने
काठमाडौँ,१३ मंसीर । शिक्षण अस्पताल महारजगंजस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै एकसाता अस्पतालमै रहने चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका छन् ।शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले प्रधानमन्त्री दश दिनपछि नियमित काममा फर्कन सक्ने जानकारी दिएका हुन् । त्यस्तै चिकित्सकहरुले एपेन्डिसाइटिसको शलयक्रियापछि सघनकक्षमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको मंगलबार र बुधबार दुईपटक डायलाइसिस गरिएको पनि जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई...
केराको बोक्रो बन्छ मोटोपन, अनिन्द्रा र क्यान्सरको औषधि
केरा एउटा यस्तो फल हो जस्ले मानिसको पौष्टीक तत्वमात्र नभई यसले मानिसलाई स्वास्थ्य रहन मद्धत गर्दछ । यसमा भिटामिन बी-६, बी-१२, पोटाशियम र म्याग्नेशियम जस्ता आवश्यक पोषक तत्व पाईन्छ । बिशेष गरि केरा मसल्स र तौल बढाउनको लागि उपयोगी हुन्छ । हामी केरा खान्छौ तर तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ की त्यही केराको बोक्राले मानिसमा लाभदायक कार्य गर्दछ । केराको बोक्रामा भिटामिन ए प्रचुर मात्रमा हुन्छ । जसले शरीरको रोग प्रतिरोधक...
म्याग्दी, १३ मङ्सिर तोकिएअनुसारको काम गरेको भए बेनी अस्पतालको भवन बनिसक्थ्यो । निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध कार्यालयको लापरवाहीका कारण भवन बनिसक्नुपर्ने समयमा आधा पनि प्रगति हुन नसकेको हो । गत असारदेखि कार्यक्षेत्र छोडेका मजदूर र निर्माण व्यवसायी अझै काममा फर्किएका छैनन् । तीनतले ५० श्ययाको अस्पताल भवन अन्डरग्राउन्ड ढलान गरेपछि अलपत्र छाडिएको हो । भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताउनुभयो...